ऋतिकसंग किन डराउँछन् सैफ अलि खान ? भन्छन्, ‘ऋतिकसंग काम गर्नुपर्छ भन्ने थाहा पाएको भए म फिल्म नै खेल्थिन’ – Jagaran Nepal
ऋतिकसंग किन डराउँछन् सैफ अलि खान ? भन्छन्, ‘ऋतिकसंग काम गर्नुपर्छ भन्ने थाहा पाएको भए म फिल्म नै खेल्थिन’
एजेन्सी । बलिउड अभिनेता सैफ अली खान र ऋतिक रोशन १९ बर्ष पछि फेरि सँगै देखिने भएकाछन्। यी दुबै अभिनेता तमिल सुपरहिट फिल्म विक्रम वेधा को हिन्दी रिमेक मा काम गरीरहेका छन्। दर्शकहरु यो फिल्मको प्रतिक्षामा छन्।
सैफ अली खानले यो फिल्म रिलीज हुनु अघि आफ्नो सह कलाकार ऋतिक रोशन को प्रशंसा गरेका छन्। उनी भन्छन् कि यदि उनी ऋतिक संग नृत्य गर्नु पर्छ भन्ने पहिले नै थाहा पाएको भए फिल्ममा नै खेल्ने थिएनन् । उनी सो फिल्मको रिमेकमा काम गर्ने थिएनन् । उनले विक्रम वेधाको रिमेकको कुरा गरिरहेका थिए ।
ऋतिक र सैफ १९ वर्ष पहिले यो फिल्ममा सँगै देखिएका थिए
सैफ अली खान र ऋतिक रोशन तमिल सुपरहिट फिल्म विक्रम वेधा को हिन्दी रिमेक मा एक साथ देखिनेछन्। यसअघि दुबै कलाकारले २००२ को फिल्म ना तुम जानो ना हम मा सँगै काम गरेका थिए। सैफ अली खानले आफ्नो एक अन्तर्वार्तामा भने कि उनी ऋतिक संग विक्रम वेधा को हिन्दी रिमेक मा काम गर्न अस्वीकार गर्न सक्थे।
वास्तवमा सैफले आफ्नो अन्तर्वार्तामा भने कि हामीले यो फिल्मको स्क्रिप्ट पढिसकेका छौं र यो एक धेरै चुनौतीपूर्ण भूमिका हुने छ। ऋतिक एक महान अभिनेता र नर्तक हुन्। यही कारणले गर्दा म बिहान उठ्छु र उनीहरुको अगाडि उभिन कडा मेहनत गर्नु पर्छ। यो अन्तर्वार्तामा सैफको साथमा अर्जुन कपूर पनि उपस्थित थिए।
सैफ र अर्जुन ‘भू त पुलिस’ मा सँगै काम गरिरहेका छन्। जब अर्जुनले ऋतिकको तुलनामा सैफको नृत्य कौशलको मजाक उडाए, उनले भने, ‘यो साँचो हो कि यदि ऋतिक संग नृत्य गर्न भनिएको भए सायद मैले विक्रम बेधामा काम गर्ने थिइन् ।’ ‘विक्रम वेध’ २००२ मा रिलीज भएको थियो। यसमा आर माधवन र विजय सेतुपति मुख्य भूमिकामा थिए। अब यो फिल्म को हिन्दी रिमेक बनिरहेको छ।
सैफ अली खान भन्छन कि फिल्म ‘ना तुम जानो ना हम’ मा उनको भूमिका सानो थियो। उनले भने कि उनी धेरै बर्ष पछि ऋतिक रोशन संग फेरी काम गर्न को लागी उत्सुक छन्।